तपाईको मोवाइल हरायो ? यसरि पत्ता लगाउनुस – Taja Media
तपाईको मोवाइल हरायो ? यसरि पत्ता लगाउनुस
August 15, 2020 August 16, 2020 - by Admin
तपाइँ हामी मध्ये मोबाइल प्रयोग नगर्ने होला र आजको यो जमानामा ! प्रबिधि को यो जमानामा मोबाइल अब मोबाइल मात्र रहेन, संसार नै मोबाइल भित्र आइसक्यो। बिशेष गरि स्मार्टफोनले त दुनिया नै परिबर्तन गरिसेको छ। फोन गर्ने देखि सामाजिक संजालको प्रयोग गर्ने गरिन्छ भने बैंकको पैसा निकाल्ने अनि बिजुली पानीको बिल समेत मोबाइल बाट समय आइसकेको छ। यस्तोमा हाम्रो अति नै संबेदनशिल डाटा भएको फोन यदि हरायो वा चोरी भने के गर्ने? कोहि गलत व्यक्ति को हातमा पर्यो भने के हुन्छ? यस बाट बच्न के गर्न सकिन्छ ?
तपाइले ई डिभी २०२१ को रिजल्ट हेर्नु भयो? यसरि हेर्नुस -भिडियो
हराएको मोबाइल वा चोरी भएको मोबाइल खोजी गर्नका लागि आइएमइआई नम्बर अति नै महत्वपुर्ण हुन्छ। आइएमइआई नम्बर को सहयोगमा सजिलो संग हराएको मोबाइल खोज्न सकिन्छ। आइएमइआई भनेको इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी हो, यो १५ वा १७ अंकको हुन्छ । । प्रत्येक मोबाइल सेटको आइएमइआई नम्बर फरक फरक हुन्छ ।
यो विशेष गरी मोबाइलको पछाडिको भागमा ब्याट्री राख्ने ठाउँको मुनि लेखिएको हुन्छ । त्यस्तै यदि तेहा नभेटिए मोबाइलमा *#06# डायल गरेर पनि आफ्नो आइएमइआई नम्बर पत्ता लगाउन सकिन्छ । तपाइको मोबाइल हराईसकेको छ र तपाईलाई उक्त मोबाइलको आइएमईआई नम्बर थाहा छैन भने पनि प्रहरीले तपाइको नम्बर अनुसार पत्ता लगाउँछ । यदी हराएको छैन भने पनि आफुले चलाउने मोबाइलको आईएमईआई नम्बर हेरेर सुरक्षित तरिका ले लेखेर राख्नुहोला, यदि कुनै दिन दुर्भाग्यबस तपाइको मोबाइल हराई हालेमा वा चोरी भएमा आबस्यक पर्छ।
मोबाइल हराएमा वा चोरी भएमा यथासिघ्र नजिकको नेपाल प्रहरीको कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्छ । उक्त निवेदनका साथ आइएमइआई नम्बर पनि उपलब्ध गराउनु पर्छ । तपाईले निवेदन दिए पछि त्यसै अनुसार प्रहरीमार्फत नै मोबाइल सेटको खोजी हुन्छ । यसबाट मोबाइल सेट पाइने सम्भावना अति धेरै हुन्छ । प्रहरीले ट्रयाकिङ गरी उक्त सेटको खोजी गर्छ ।
तपाइको हराएको मोवाइलको सिम चोर्नेले तपाइको सिम फालीदिएर आफ्नो सिम हाल्ने बित्तिकै उक्त जानकारी प्रहरीलाई थाहा हुन्छ । उसले तपाइको मोबाइलमा कति नम्बरको सिम हाल्यो भन्ने कुरा प्रहरीले थाहा पाएपछी उक्त नम्बरमा ट्रयाक गरेर वा उसैलाई फोन गरेर प्रहरीले तपाइको मोबाइल प्रहरीलाई फिर्ता गर्न भन्छ र तपाइको मोबाइल पाइन्छ ।
Previous Article Wifi को पासवर्ड चोरी भएर हैरान हुनुभयो, यसरि आफ्नो Wifi सिग्नल लुकाउनुस
Next Article एनसेलका ग्राहकले अब सजिलै डाटा र भ्वाइस प्याकहरू लिन सक्ने
स्पर्सको अर्धवार्षिक समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न !!
अब कति कित्ता पर्ला ? नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक, आईपीओमा १५ लाख आवेदकबाट १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर माग
स्पर्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको चौथो वार्षिक साधारण सभा २०७७ पौष २९ गते हुने
स्पर्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको २०७७/०७८ प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रकासित, प्रतिसेयर नेटवर्थ १५९ रुपैयाँ ६७ पैसा
जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको IPO निस्कासन हुदै……
पाँच वर्ष भित्र नेपालको उत्कृष्ट वित्तीय संस्था वनाउने लक्ष्य सहित ४८ जिल्लामा ७२ शाखा कार्यालय मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै, ग्लोवल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लि .
एनआईसी एसिया लघुवित्त र स्वदेशी लघुवित्त मर्जरमा जाने भए, चुक्ता पुँजी १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ
हरपलको ताजा तथा नया खबरका साथ हामि छौ तपाईहरु माझ, हेर्दै गर्नुहोस ताजा मिडिया डट कम
Copyright © 2021 Taja Media.